Sina Shina azo tanterahina Eco-Compostable CPLA Azo ampiasaina amin'ny fanamboarana fitaovana sy trano orinasa | Gianty
Ny takelaka fanontana azo ampiasaina bioplastic dia vita amin'ny bioplastic compostable. Ny akora dia antsoina hoe PLA ary namboarina ho an'ny cornstarch. Tsy misy menaka plastika ary tsy misy peste. Ity kofehy vita amin'ny loko marevaka ity mba hahafinaritra kokoa amin'ny sakafo hariva. Maivana sy mahazo aina ampiasaina, izay tonga lafatra amin'ny toby trano na fialan-tsasatra. Ny milina fanamainty dia azo antoka, aza ampidiro amin'ny microwave.
Ahodino ireo entana azo ampiasaina ho an'ireo azo ampiasaina
Tsotra ihany io kofehy io ary tafiditra ao ny fampiharana ny fanananao rehetra. Ampiasao any an-trano ny takelaka, kaopy sy kapoaka ao an-trano rehefa manao fety ao an-trano ianao na mandeha amin'ny fitsangatsanganana iray. Tsy mila mampiasa ny china na seramika tsara indrindra ianao. Misafidiana takelaka lafo sy maivana kokoa ary maivana kosa ny takelaka CPLA azo ampiasaina amin'ny fanaovana piknik.
Mihena kely rehefa mandeha
Tsy mora matetika ny misoroka ny zavatra ampiasain'ny tokana rehefa mivoaka, fa ny fanampiana sasany dia afaka manampy. Ohatra, ny fitazonana vata fampangatsiahana azo ampiasaina sy kitapom-panamboarana azo ampiasaina dia afaka manomana anao amin'ny fisakafoanana farany amin'ny minitra farany.
Ny kitapom-bolam-baravarankely azo ampiasaina CPLA dia vita amin'ny asidra polylactic. Ny bioplastika dia manondro plastika vita amin'ny zavamaniry na zavatra biolojika hafa fa tsy solitany. Matetika koa antsoina hoe plastika mifototra amin'ny bio.Izany dia azo atao amin'ny fitrandrahana siramamy avy amin'ny zavamaniry toy ny katsaka sy siramamy mba hiova ho asidra polylactic (PLA), na azo atao avy amin'ny polyhydroxyalkanoates (PHAs) namboarina avy amin'ny microorganismes. Plastika PLA dia matetika ampiasaina amin'ny fonosin-tsakafo.
Polylactide (PLA), dia thermoplastic havaozina sy polymer. Izy io dia «vokarina» avy amin'ny tsiran'ny zavamaniry toy ny katsaka, fary na siramamy, siramamy sy famoronana siramamy, fanaovana azy ho tontolo iainana sy maharitra. Ny famoahana ny siramamy amin'ireto zava-maniry ireto dia miteraka asidra laktika ary aorian'ny fihetseham-po fanampiny, dia misy endrika lactide. Aorian'ny fanodinana sy ny fanaovana polymerisation dia vokarina ny résolisiona polylactide. Ny vovony azo vokarina dia mety ho tsindrona ary mitsoka voamboatra, hamolavola vokatra azo disika anisan'izany ireo aseho eto ambany.
Ny polylactide dia azo biodegradable, satria miharihary fa vokatry ny fiparitahan'ny taratra ultra violet amin'ny tara-masoandro sy ny oxygen. Mihena ny fanamboarana karbonika sy rano, izay tsy mampidi-doza ny tontolo iainana.
Content Ny lovia, kaopy, sotro, sotro
Fanamboarana lamba PLA
Weight Rakotra 100g, kaopy 100g, vilany 15g, sotro 15g
Previous: Famoronana Bildika Famboran'ny Boky Faha-jaza marefo mahafinaritra sy mahafinaritra
CPLA + Bamboly vita amin'ny plastika mifototra amin'ny baoritra ...
Fanakafom-borona zazavavy miramirana amin'ny fomba milamina eco ...